Waa maxay kharashka ku dalbashada cashada Thanksgiving Publix? - Wareega Hantida
Bogga ugu weyn Waa maxay kharashka ku dalbashada cashada Thanksgiving Publix?
Thanksgiving waa fasax qaran oo sanadle ah gudaha Mareykanka iyo Kanada, halkaas oo ay ugu dabaaldegaan barakooyinka iyo barakada sanadkii tagay. Casho-sharafeedka Thanksgiving Publix ayaa noqon doonta mawduuca dooddeenna halkan. Dabaaldegga sannadlaha ah wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa 1621 markii gumaystaha Plymouth iyo Wampanoag Native Americans ay wadaagaan diyaafadda xilliga dayrta markii ugu horreysay.
Waxa laga yaabaa inay xiiso kuu yeelato inaad ogaato in Oktoobar 3, 1863, Abraham Lincoln uu ku dhawaaqay Thanksgiving fasax qaran. Tan iyo markaas ilaa taariikhda, dabbaaldegga mahadnaqa ayaa la fulin jiray sannad kasta. Thanksgiving waxaa badanaa la arkaa inta lagu jiro usbuuca labaad ee Noofembar.
Caadi ahaan gudaha Maraykanka, qoysasku waxay u isticmaalaan mahadnaqa daqiiqad ahaan si ay ula midoobaan qoyska iyo asxaabta. Way wada casheeyaan oo wax wada cunaan si ay u muujiyaan mahadnaq wax kasta oo wanaagsan oo u yimid. Qaarkood waxay u baxaan inay wax cunaan ama ka dalbadaan dukaamada raashinka ama makhaayadaha bixiya cuntooyinka Thanksgiving si ay u tagaan.
Qaadashada kharashka dalbashada, waxay kuxirantahay kaliya waxaad diyaar u tahay inaad kharash gareyso.
Haddaba, akhrintan, waxaanu qalinka ku duugnay dhammaan waxa aad uga baahan tahay inaad ka ogaato cashada ama cuntada mahadnaqa ee Publix iyo inta ay ku kacayso dalbashada cashada mahadnaqa ee Publix.
Ku saabsan Publix
Sida laga soo xigtay Wikipedia, Publix Super Markets, Inc., oo caadi ahaan loo yaqaan Publix, waa silsilad supermarket ah oo Mareykan ah oo shaqaale ay leedahay oo xarunteedu tahay Lakeland, Florida. Waxaa aasaasay 1930-kii George W. Jenkins, Publix waa shirkad gaar ah oo ay wada leeyihiin shaqaalihii hore iyo kuwii hore iyo xubnaha qoyska Jenkins.
Publix waxay ka shaqeysaa dhamaan Koonfur-bari ee Mareykanka, waxayna ku taal Florida (829), Georgia (194), Alabama (81), South Carolina (64), Tennessee (50), North Carolina (49), iyo Virginia (19).
Shirkaddani waa mid ka mid ah silsiladaha dukaamada waaweyn ee gobolka ee Maraykanka. Gobolka Florida ayaa leh dukaamada ugu badan, oo leh 828, oo xisaabiya in ka badan saddex-meelood laba meelood dhammaan xarumaha laga bilaabo Sebtembar 2021.
Publix waxay shaqaalaysaa in ka badan 193,000 oo shaqaale ah 1,281 dukaamada tafaariiqda ah, dugsiyada cuntada lagu kariyo, xarumaha shirkadaha, sagaal xarumood oo suuqyada waaweyn ah, iyo kow iyo toban warshadood oo wax soo saar ah laga bilaabo Janaayo 2019.
Caanaha, deli, rootiga, iyo alaabada kale ee cuntada ayaa lagu soo saaraa xarumaha wax soo saarka. Intaa waxaa dheer, Publix waa shirkadda ugu weyn ee dalka ee shaqaaluhu leeyihiin.
Maxaad Ugu Baahan Tahay Publix Casho Thanksgiving
Publix waxay dhistay sumcadeeda wanaagsan inay cashada mahadnaqa ka dhigto mid walaac la'aan ah oo lagu raaxaysanayo, Uma baahnid inaad saacado ku qaadato cunto karinta jikada. Sidoo kale, waxay kor iyo ka sii socdaan si ay cashada Thanksgiving uga dhigaan mid sahlan, dhaqso badan, oo aad loo raaxaysto.
Ka hadalka digaag la shiilay, digaaga la shiilay waa halyey oo la mid ah cunnooyinka koonfurta, iyaga oo ku dhawaaqaya inay yihiin kuwa ugu fiican.
Digaagga la shiilay ee Publix aad buu u fiican yahay. Waxay leedahay hilib suubban, qolof qallafsan, iyo xadiga ugu habboon ee basbaaska.
Intaa waxaa dheer, xidhmo casho ah oo Turki ah oo si buuxda loo kariyey oo leh turki iyo suxuunta dhinaca ayaa diyaar ah, inkastoo ay u baahan doonto kuleyl.
Ma jiraan Qorshayaal Cunno gaar ah oo ku jira Casho-sharafeedka Thanksgiving Publix?
Haa, waxaa jira qorshayaal cunto kale oo ku jira casho mahadnaqa Publix kuwaas oo ah:
maraq qashin ah
Mushrooms carsaanyo leh
Turkiga Cobb Salad
Jeexjeexyada Afar-caleemood ee duubista
Dubo Turkiga oo ay ka buuxaan kareemka thyme
Ma Bixin Karaa Casho-Sharafeedka Thanksgiving Publix?
Haa, waxaad dalban kartaa oo aad ku bixin kartaa cashada Thanksgiving Publix onlayn ama dukaanka dhexdiisa ugu yaraan 48 saacadood ka hor
Sida laga soo xigtay afhayeenka Publix, cuntooyinka fasaxa sidoo kale waxaa lagu dalban karaa iyada oo loo marayo Instacart si loo keeno ama laga soo qaado hareeraha, iyadoo la sugayo helitaanka alaabada iyo haddii ay u baahan tahay dalab 24-saac ah.
Waa maxay qurbaannada cuntada ee ku jira Qorshaha Casho-Cashada Thanksgiving Publix?
Waa kuwan dhowr ikhtiyaar oo aad ka dooran karto si ay kuugu habboonaadaan adiga iyo qoyskaaga, haddii aad rabto inaad ka iibsatid mid ka mid ah cuntooyinka mahadnaqa ee cuntada.
Casho-sharafeedka Turkiga ee madaxa Doomaha yaryar (Waxay u adeegtaa 2-4 qof)
Madaxa Doofada Yaryar Cunto macaan oo Jeex ah (Waxay u adeegtaa 2 – 4 qof)
Publix Deli Casho Turkiga Si Buuxda Loo Kariyey (Waxay u adeegtaa 7-10 qof)
Publix Deli Casho naasaha Turkiga oo si buuxda loo kariyey (Waxay u adeegtaa 7-10 qof)
Madaxa Boar's jeex macaan casho Ham oo aan lafo lahayn (Waxay u adeegtaa 7-10 qof)
Publix Deli Casho Turki ah oo si buuxda loo kariyey (Waxay u adeegtaa 14-18 qof).
Haddii aad rabto dhinacyo dheeraad ah ama uu jiro mid aadan ka heli karin, Waxaad ku bilaabi kartaa dhinacyadan
Yukon Gold baradho shiidan
Broccoli ama Gratin
Spinach la kariyey
Labbiska rootiga galleyda ee-dii hore
Casserole baradho macaan
Saddex baastada farmaajo
Risotto khudaar goosan
Cajiib ah oo la shiiday
Publix ma bixisaa Casho Mahadcelin la diyaariyey?
Haa, waxay bixiyaan casho loo diyaariyey Thanksgiving. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad sameyso 48 saacadood oo ogeysiis ah dhammaan amarradaada.
Waxyaalaha aad ka heli karto
Intaa waxaa dheer, Publix's cunnada mahadnaqa ee buuxda waxa lagu sii dayn karaa fasaxa quudiya ilaa 18 qof. Waxay la socotaa turkiga Butterball oo si buuxda loo kariyey, labiska fasaxa, baradhada shiidan, maraqa, raaxaysiga marshmallow, iyo relish karanberry-orange.
Qaar ka mid ah cuntooyinkan waxay qaataan ilaa 2.5 saacadood si ay u kululaadaan. Dhammaan tilmaamaha kululaynta ee alaabta dhamaantood waxay la socdaan cuntada.
Sababta kululaynta ayaa ah in cuntada lagu iibiyo qabow bakhaarkeena oo u baahan in lagu kululeeyo guriga. Cashada turkiga, turkigu waa inuu ahaado mid qabow, dhalaalay, oo xoogaa baraf ah, laakiin waa in aan la barafaysan.
Waa maxay Kharashka Dalbashada Casho-Sharafeedka Thanksgiving Publix?
Sida laga soo xigtay mareegaha Publix, waa kan qiimaha kala duwan ee cuntooyinka mahadnaqa ee Publix si loo dalbado.
Xidhmada cashada turkiga ee 2-4 qof qiimihiisu waa $36.99,
Xidhmada cashada ee 7-10 qof waxay ku kacaysaa $54.99
Xidhmada cashada ee 14-18 qof waxay ku kacaysaa $99.99.
Xusuusnow in fasaxyadu ay noqdaan kuwo lagu raaxaysto oo nasasho leh, ma aha daal iyo canshuur. Mararka qaarkood waa fikrad wanaagsan inaad lacag yar ku bixiso si aad wakhtigaaga u soo ceshato.
Maxaad uga dalban weyday cashadaada Thanksgiving ee Publix inay aado sanadkan si aad u nasato oo qof kale ugu oggolaado inuu qabto cunto karinta. Kharashka, maaha mid aad u badan eegida shaqada la qabtay oo kuu fududaynaysa.
17 App -ka Dalbashada Cunnada ugu Fiican Hindiya | 2022 Faallooyinka ugu Fiican
Shirkadaha wax iibsiga ugu dahsoon ee UK | 2022